I-LG V40 iya kufika ineekhamera ezintlanu zizonke | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Iiselfowuni, Izaziso
I-LG sele isebenza kwisiphelo sayo esitsha. Uluhlu oluza kukhokelwa yi-LG V40, malunga namahemuhemu okuqala aqala ukufika. Kuba kubonakala ngathi inkampani yaseKorea ithathele ingqalelo into ethandwayo kwimarike yanamhlanje. Kuba bafuna ukulandela ekhondweni lomnxeba njengeHuawei P20 Pro.
Uninzi lwenu sele nisazi, iHuawei P20 Pro sisiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina esineekhamera ezintathu zangasemva. Imodeli ebiligugu kwintengiso. Kubonakala ngathi i-LG V40 ifuna ukulandela la manyathelo, kuba izakuza neekhamera zangemva ezintathu.
Ukucacisa ngakumbi, Le LG iphezulu iya kuba neekhamera ezintlanu zizonke. Kuba kulindeleke ukuba ngaphambili ibe ne-double sensor, eya kuthi yongezwe kwikhamera kathathu ngasemva esele sithethile. Ke ithembisa okuninzi kwicandelo lokufota.
Ngokubona inzwa ephindwe kabini ngaphambili, kulindeleke ukuba enye yeekhamera ezimbini ze-LG V40 esetyenziselwa ukuvula ubuso. Leyo yindlela oziva ngayo, ukuba iya kuba neyayo inzwa. Ke ayizukusebenza kwikhamera kunye nezinye iimodeli.
Ngelixa ikhamera yangasemva kathathu iya kuba neenzwa ezinemisebenzi eyahlukeneyo. Nangona ngoku kungaziwa ukuba loluphi uhlobo lwenzwa nganye nganye eya kuba yiyo. Kodwa kuyacaca ukuba luqwalaselo oluza kuthembisa ukufumana okuninzi kwicandelo lokufota. Kwakhona, qiniseka ubukrelekrele bokufakelwa buye badlala indima yokumisela kule LG V40.
Okwangoku ayaziwa ukuba le LG V40 iza kufika nini kwintengiso. Ke kuyakufuneka silinde ezinye iindaba ukuba zifike malunga nayo. Ngokuqinisekileyo kulo lonke ihlobo amarhe angakumbi ngesi sixhobo aya kufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG V40 iya kuba neekhamera ezintlanu zizonke